Dadka lacagta leh oo inta badan booqda xarumaha caafimaadka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dadka lacagta leh oo inta badan booqda xarumaha caafimaadka Foto: SR.
Dadka lacagta leh oo inta badan booqda xarumaha caafimaadka
Nidaamka ah in qofku doorto dhakhtarka uu rabo iyo waliba helitaanka caafimaad la hubo ayaa ah kuwo aan inta badan dadku u wada sinnayn, taasi oo keenta in dadka inta badan aadka u xannuunsanayaa aan mihiimadda koowaad la siin.
Sidaasi waxa qoray xafiiska xisaabaadka qaran kadib qiimayn uu sameeyay. Qiimayntan ayaa muujinaysa in uu fiicnaaday xidhiidhka dadku la yeelan karaan xarumaha caafimaadka ee ay rabaan, laakiinse ay fursadda badan markasta helaan dadka aan qabin baahi caafimaad oo weyn iyo dadka dhaqaalaha badan lihi.
Tusaale ahaan, xarumaha caafimaadka tayadoodu fiican tahay waxa inta badan laga furaa deegaanada ay dadka lacagta iyo aqoonta lahi deggan yihiin ee ay waliba da'dooduna ka yar tahay 70 jirka. Halka inta badan xarumaha caafimaadka ee la xidhaa ku yaallaan deegaanada ay ku nool yihiin dadka uu dhaqaalahoodu hooseeyaa.
Qiimayntan uu sameeyay xafiiska xisaabaadka qaranku waxa ay muujinaysaa in dadka caafimaadka qabaa badi yihiin kuwo markasta taga xarumaha caafimaadka, halka dadka aadka u xanuunsani aanay badi helin fursaddaa.